amagama Trade "Solkoseril" futhi "Aktovegin 'kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso izidakamizwa - gemodializatu deproteined, okuhlanganisa eziningi izingxenye ephansi yamangqamuzana igazi serum futhi yengqamuzana avalele amathole. "Solkoseril" ampoules ngesimo si noma yokugcoba kwandisa abatholako yeselula izakhi kanye nomoya-mpilo ukusetshenziswa (ukulethwa ngcono glucose ne-oxygen ukuze amaseli, okuyizinto in a state of ukuntuleka komoya-mpilo - hypoxia), ngesivinini futhi kuvusa umzimba futhi ukuvuselelwa kwezicubu ezilimele . Ngakho synthesis intracellular ka ATP luyanda, kanjalo isebenze izinqubo okuzivuselela futhi reparative ezicutshini, kuvusa ukukhula ezicutshini zomzimba ngenxa cell ayanda (ayanda indlela usebenza) zezinzwa izicubu zamagama collagen semithambo izindonga. "Solkoseril" e ampoules akunamthelela anobuthi.
Kusukela ngo-1996, lesi sitshalo ikhiqiza izidakamizwa (asethuthukile abadumile inkampani Swiss Nycomed Holdings A / S). I izakhiwo lokhu ukulungiselela abangu wafunda izindlela kwemithi namakhemikhali kancane kuphela. Kwakuvamise emazweni ahlukahlukene (kahle ezweni lethu), kodwa eNtshonalanga Yurophu, Japan, Australia nakwamanye amazwe ukuze isetshenziswe ketshezi ayigunyazelwanga njengoba izidakamizwa. Njengoba ithunyelwa "Solcoseril" in dark ingilazi ampoules-2 kanye nomthamo 5 ml. Ngo 1 ml isixazululo esicutshini noma ekuphathweni emthanjeni iqukethe 42,5 mg (on ngesisekelo ezomile) ka dialysate deproteinized. I ampoules Agcwele amakhadibhodi amabhokisi Valium planimetric. Futhi, izidakamizwa ikhiqizwa ngesimo gel noma wamafutha uhlobo Ukukhululwa - e amashubhu nge 20 isisindo nomuthi g.
Isixazululo izidakamizwa saphathwa ngemithambo yegazi noma intramuscularly. Ukuze ukusetshenziswa emthanjeni "Solcoseril" e ampoules sihlakazwa aqueous sodium chloride isixazululo nge ingxenyenamba mass 0.9%, noma isixazululo dextrose aqueous lokuhlushwa 5%, noma inhlanganisela yalezi izixazululo ephethe isilinganiso 1 i: 1. Ukuze ugweme ukuvuvukala imithambo ukwethulwa izidakamizwa kufanele kube kancane. uyijova esicutshini isetshenziswa (hhayi ningi than 5 ml), ukunikeza imijovo wendawo. "Solcoseril" ebekiwe yezifo nemilenze aphansi ngenxa semithambo permeability iziyaluyalu noma nesifo esingamahlalakhona emithambo yegazi, izilonda emithambo yegazi, angiopathy sikashukela, burns 2 no-3 degrees, decubitus, ukwa noma ukuthambisa izicubu ngenxa ukuvezwa kwesikhathi eside uketshezi e izilonda cornea. Ukusebenzisa izidakamizwa ikhonjiswa nge umonakalo ngemisebe isikhumba grafts.
Ngasikhathi sinye, uma kudingeka, udokotela angase antibiotic, vasodilator izidakamizwa. Nge ukuqapha okukhethekile "Solcoseril" iqondiswa ngenkathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithuthukisa okuqukethwe potassium yegazi (isisu potassium-engashiyi, i-potassium izakhamzimba, ACE inhibitor). Futhi hhayi Kunconywa izidakamizwa ekuhlanganyeleni ezithaka imithi "Solkoseril" e ampoules ngesikhathi esifanayo phytoextracts. Umuthi aluhambisani ne naftidrofurilom, amafomu parenteral ka ginkgo biloba futhi bencyclane fumarate. "Solkoseril" is contraindicated ezinganeni kanye intsha (eneminyaka engaphansi kwengu-18) ubudala. Uma side effects kuyagcinwa, ngaleso sikhathi ukusetshenziswa lokhu izidakamizwa imiswe okwesikhashana noma kunqanyulwe isivumelwane nabo. futhi kudinga isicelo ngokucophelela «Solcoseryl" (njalo ngaphansi kweso lwezokwelapha kanye kuphela esiphuthumayo) ngesikhathi sokukhulelwa. Ngezinye izikhathi lapho owesifazane ibele ukusetshenziswa "Solcoseryl" akuvunyelwe.
Ukusebenzisa izidakamizwa "Solkoseril" (imijovo, si namafutha) kungenziwa kuphela udokotela. Imiyalelo, elisesifundeni iphakheji izidakamizwa, kanye lesi siqephu ngolwazi kuphela futhi angeke esikhundleni somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela, okuyinto uzoqoka indlela yokuphathwa, umthamo, futhi ukuhlola kungenzeka ukwelashwa kanyekanye nezinye izidakamizwa.
Uphudingi Khanyisa amaminithi awu 5. Zogwadule ukupheka lula
Amathiphu ekudaleni zezinwele Dzhastina Bibera